भ्रममा नपर्नुस्, होटेलमा बस्दा यी कुरामा ध्यान दिनुस्
काठमाडौं, १३ पुस — छुट्टी हुँदा रमाइलोका लागि अनि अफिसियल ट्रिपका बेलामा हामी होटेल रिजर्भेसन गराउँछौं । राम्रो होटेलमा बस्दा एक रातको तीन चार हजार रुपैयाँ त कम्तीमा परिहाल्छ । अनि पैसा तिरेपछि सबै कुरा टिपटप होस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ ।
कोठा सफा हुन्, होटेलका स्टाफ विनम्र हुन्, होटेलमा सबैखाले सुविधा हुन् भन्ने तपाईंको चाहना हुन्छ नै । तर वास्तवमा यही हुन्छ त ? यहाँ हामी तपाईंलाई यस्ता कुरा बताउँछौं जुन होटेलका मान्छेले तपाईंबाट लुकाउन खोज्छन् ।
तपाईंको कोठा जति सफा देखिन्छ, त्यति हुँदैन । हेर्दा त सफा देखिन्छ तर बेड कभर प्रायः सफा हुँदैन । कोठामा राखिएको गिलास त पानीले यसो धोइएको मात्र हुन्छ अनि कतिचोटि त त्यसमा हानिकारक रसायन पनि हालेको हुन्छ ।
कोठामा भएको गिलासलाई पालिस लगाएर टल्काइएको हुन्छ । हेर्दा चमचम चम्किने त्यस्ता गिलासमा हानिकारक रसायन हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ त होटेलका स्टाफलाई टिप दिनुभएन भने बाथरूमको पानीले धोइदिन्छन् ।
ठूला होटेलका कोठामा मिनीबार लगाइएका हुन्छन् । तिनमा पानी, बीयर, जुस तथा हार्ड ड्रिंक पनि राखिएका हुन्छन् । यस्ता सर्भस फ्री हुन्नन् । अनि मिनीबारमा राखिएको बोतलको सिल अवश्य चेक गर्नुहोला ।
हुन त दिनदिनै कोठा सफा गर्न कर्मचारी आउँछन् तर तपाईं सुतेको बेलामा कीराले टोकेमा के गर्नुहुन्छ ? होटेलको स्टाफले कोठामा कीरा मार्ने औषधी कहिले छर्केको थियो भन्ने बताउँदैन ।
केही मानिस होटेलमा गएर एकान्तवास गर्न सकियोस् भन्ने इच्छा राख्छन् । यस्तामध्ये केही व्यक्तिलाई प्राणघातक रोग लागेको हुन सक्छ । तिनीहरू होटेलमै मर्न सक्छन् । कसैले चाहिँ होटेलको कोठामै आत्महत्या गर्न सक्छन् । होटेलका मान्छेले यस्ता कुरा लुकाउँछन् । मान्छे मरेको कोठा नै तपाईंलाई दिन सक्छन् ।
होटेलमा अनेकौं दुर्घटना भइरहेका हुन्छन् । तरकारी काट्दै गर्दा कूकको औंलो काटिन सक्छ । भ–याङबाट झर्दा कुनै कर्मचारी लड्न सक्छ । लिफ्ट बनाउँदा रिपेयरम्यान मर्न सक्छ । यस्ता कुरा मिडियामा आउँदैनन् । के थाहा, तपाईं पनि दुर्घटनामा पर्न सक्नुहोला ।
होटेल सञ्चालकले आफ्ना कमजोरी जनतासमक्ष नपुगोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरू प्रहरीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउँछन् । होटेलका नराम्रा कुरा बाहिर नआओस् भनेर घूस खाएका प्रहरीले आँखा चिम्लिदिन्छन् ।
होटेलमा सामान हरायो भने फिर्ता पाउन गाह्रै छ । होटेलको स्टाफले नै चप्काइदिन्छन् । नभएर अर्को गेस्टले नै राखिदिन्छ । कुनै सामान कोठामा छुट्यो भने तत्कालै होटेल व्यवस्थापकलाई खबर गरिहाल्नुस् ।
पुस १३, २०७३ मा प्रकाशित